မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ကျဆင်း နိုင်ငံ ခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းစံချိန်တင်မြင့်တက် - Myanmar Pressphoto Agency
မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ကျဆင်း နိုင်ငံ ခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းစံချိန်တင်မြင့်တက်
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ယနေ့(စက် တင်ဘာ ၁၀ ရက်)နေ့တွင် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းများစံချိနိတင် မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ယနေ့ ငွေလဲလှယ်နှုန်းပြင်ပပေါက်စျေးမှာ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာလျှင် ၂၀၂၀ကျပ်နှင့် ထိုင်းငွေ ၁ ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ ၆၀ကျပ် ဝန်းကျင်ထိမြင့်တက်နေကြောင်း သိရသည်။
” ဘတ် ယူမယ်ဆိုရင် တသိန်းကို ၁၇၃၀ကျပ်ပါ။ ပြန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၁၇၄၀ လောက်ပေါက်တယ် ။ပြီးခဲ့တဲ့လဆန်းပိုင်းထိက ၅၃ကျပ်ပဲရှိတယ်။ ဒီတပတ်ထဲမှာကို တရိပ်ရိပ်တက်နေတယ် ” ဟု ကော့သောင်းမြို့မှ ငွေလဲလှယ်သည့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတဦးက MPAသို့ပြော သည်။
ယနေ့ (စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်)နံနက်ပိုင်း စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ဗဟိုဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက်အရ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာတလျှင် ၁၇၄၀ကျပ်ဖြစ်ပြီး ဘတ်ငွေပေါက်စျေးမှာ ၅၆ ကျပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်အာဏာမသိမ်းမီ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်နေ့တွင် အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၃၃၁ ကျပ် ၊ထိုင်း တစ်ဘတ်လျှင် ၄၄ ကျပ်သာရှိခဲ့ရာမှ စစ်အာဏာ သိမ်းပြီး ၇လကျော်အကြာတွင် ယခုကဲ့သို့ ငွေ လဲလှယ်နှုန်း စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ကျပ်ငွေတန်ဖိုးပိုမိုကျဆင်းလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဌအား ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ ”လတ်တလောတွင်ဖြေရှင်းစရာ မရှိ သေးပါ” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်၏ ၇လ ကျော်အကြာအာ ဏာသိမ်းယူထားသည့်ကာလအတွင်း နိုင်ငံ၏ ဘ ဏ္ဍာမလုံလောက်မှုကြောင့် ငွေစက္ကူအသစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း၊ ဗဟိုဘဏ်ရှိ နိုင်ငံ ခြားငွေများ သန်းရာနှင့်ချီထုတ်ရောင်းချခြင်းများ အပါအဝင် လွဲမှားသောစီမံခန့်ခွဲမှုများကြောင့် ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ငွေကြေးပညာရှင်များထံက သိရသည်။
#မြန်မာကျပ်ငွေ #တန်ဖိုးကျဆင်း #ငွေလဲနှုန်းမြင့်တက် #ဗဟိုဘဏ် #MPA
Myanmar Currency Continues to Depreciate; Foreign Exchange Rates Reach Record High
Myanmar’s Kyat currency has continued to depreciate since the military coup and today, September 10, foreign exchange rates hitarecord high.
Today, external exchange rates had 1 US dollar at 2020 Kyats and 1 Thai Baht at around 60 Kyats.
“In Baht, it’s 1730 for 100,000 Kyats. In buying price, it’s around 1740. It was 53 until earlier the month. It’s going up gradually this week,” said an exchange rate worker in Kawthoung to MPA.
According to the SAC-controlled Central Bank’s report today – September 10 – 1 US dollar is 1740 Kyats and 1 Baht is 56 Kyats.
Before the coup on January 31, 1 US dollar was 1331 Kyats and 1 Thai Baht was 44 Kyats and the record high rates have occurred after seven months into the military coup.
Regarding the Kyat currency depreciation, vice president of the Central Bank was contacted and he said, “Currently, there’s nothing to explain yet.”
Financial experts observe the Kyat currency depreciation has been caused by reissuance of new banknotes due to state budget deficiency, selling out hundreds of millions of foreign currency from the Central Bank and mismanagement by the Myanmar military within seven months of taking power.
#MyanmarKyatCurrency #Depreciation #ExchangeRateIncrease #CentralBank #MPA
Tags: Business, Min Htet Mone, MPA, Myanmar, News